Igumbi lokulala eli-6 eliNtofontofo kwiChibi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJana
Obu buhle be-1917 bubekwe kwithambeka elisecaleni kwebala eliphumelele ibhaso legalufa kunye ne-x-country ski/trails. Ibekwe phezu kweLake Manitou enye yeembono zobubele, i-4000 yonyawo lwesikwere ekhaya kwi-2 amaqashiso ilungele ukubaleka kulo lonke uhlobo, ukuzingca ngoyilo olumangalisayo, uyilo, kunye nemigangatho yefir yokuqala. Amagumbi omgangatho wegadi ama-4 anegumbi lokuhlambela labucala elinesiqingatha kunye neeshawa kunye nezinto eziluncedo ngaphandle nje komnyango. Ibhafu yonyawo lozipho kwinqanaba eliphezulu sisiphelo esigqibeleleyo sosuku olugqibeleleyo.
Thatha eyokuqala ekhohlo ukuya kwibala legalufa xa ungena kwiResort Village yaseManitou Beach usuka kuhola wendlela 365. Uya kusifumana kwindlela yesibini yokuqhuba ukuya ekunene, ejongene nekhosi yeLungu Lounge. Kukho indawo yokupaka enkulu enegumbi lezithuthi ezisibhozo, kunye neyongezelelweyo yokupaka simahla phezulu!
Amanyathelo ukusuka kuluhlu lokuqhuba, i-tee yokuqala, ukukhwela intaba kunye neendlela zokutyibiliza. Iibhloko ezi-2 ukusuka kwindawo yokuqhuba, igalufa encinci, ibala lenkampu, kunye nonxweme. Ukuhamba okuhle ngaselunxwemeni ukuya kwindawo ye-spa, iigalari, i-mini mart, ulwandle oluphambili, indawo yokudlela, kunye nokuzonwabisa--kukho izinto ezisisigidi zokwenza kwilali emangalisayo yeResort yaseManitou Beach. Ukunyuka indalo, iindlela zokunqumla ilizwe, isileyidi, irenki yangaphandle, kunye nendawo yokugcina iintaka ekufutshane. Ubumelwane buzolile, bukhuselekile kwaye buzolile. Uza kuyithanda apha.